Ergooyinkii ka qeyb galayay shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo isaga baxay (Dhageyso) – STAR FM SOMALIA
Ergooyinkii ka qeyb galayay shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo isaga baxay (Dhageyso)
Ergooyinkii ka qeyb galayay shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe ayaa isaga baxay shirka, kaddib kadib markii Wasaaradda arrimaha gudaha u sheegtay in aysan jirin wax dhaqaale ah oo loogu tala galay ergada.
Ergada oo loo qeybiyay saaka dastuurka maamulka labada gobol ayaa isaga baxay hoolka shirarka, iyagoo diiday inay sii fadhiyaan kana doodaan dastuurka.
Hase yeeshee waxaa soconaya dadaalo ay wadaan saraakiil ka socota urur goboleedka IGAD kuwaasoo doonaya inay ergada ku qanciyaan in ay shirka sii joogaan.Ergada oo aan weli soo dhamaystirmin ayaa haatan waxaa ka dhex bilowday khilaafka ku salaysan dhanka dhaqaalaha.
Qaar ka mid ah ergooyinkii ka yimid gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay dib ugu laabanayaan gobolkoodii maadaama aysan jirin wax xuquuq ama tixgelin ah oo ay ka heleen shirka.
Shirka maamul u sameynta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa waxa uu weli la kulmayaa caqabado hor leh iyadoo ay shirka ka maqan yihiin qaar kamid ah beelaha dega labada gobol oo diiday inay shirka ka qeybgalaan kadib markii ay ku qanci waayeen qaabka qeybsiga xildhibaanada maamulka labada gobol.
Sidoo kale waxaa shirka ka muuqan qoondadii ay haweenka lahaayeen iyadoo dhammaan beelaha soo gudbiyay xildhibaanada ay soo gudbiyeen rag. Haweenka ayaa loo sheegay in ay iska sabraan maadaama haatanba xildhibaanada la soo gudbiyay ay ku yimaadeen waanwaan muddo dheer soo jiitamaysay.
Shirka maamul u sameynta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa u muuqda weli mid aanay ka soo bixi karin maamul lagu wada qanci karo oo ay yeeshaan labada gobol SH/dhexe iyo Hiiraan.
Halkan hoose ka akhriso Codka Ergada isaga baxday Shirka:-
Faah-faahin: Khasaaraha Qaraxa ka Dhacay Maqaaxida BlUE SKY
War Deg Deg Ah : Qarax Xoogan oo Goordhaw ka dhacay magaalada Muqdisho